Nidaamka Tareenka | RayHaber
Talaabooyin la taaban karo oo loo qaadayo Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Sakarya; Duqa magaalada Ekrem Yüce ayaa la kulmay Professor Gareeye Mustafa Ilıcalı oo yiri: “Waxaan si aad ah ugu dadaalnaa sidii aan qaadi lahayn talaabooyin la taaban karo oo ku saabsan nidaamyada tareenka. Gaadiidka [More ...]
Madaxweynaha Aktaş Kahraman ayaa abaal-mariyey darawalka; Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, inta uu baska saaran yahay dhamaan rakaabkii ku jiray dhiig qabow si ay si habsami leh uga daadgureeyaan, ayagoo hor maraya musiibo suurta gal ah [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalo Xeebeedka SAMULAŞ waxay Marti galisay Kulankii ay Yeesheen Gudiga Howlgalka Gawaarida ee Ururka Dhamaan Wadooyinka Tareenka (TÜRSİD). Macluumaadka iyo khibradaha ayaa lala wadaagay kulanka oo ay ka soo qeybgaleen wakiilo ka socda degmooyinka ka shaqeeya nidaamka tareenka. mastiff [More ...]
Kordhinta dadweynaha iyo horumarinta maalin kasta oo dhaafaya, dhibaatada ugu weyn ee Sakarya waxay muujineysaa in muwaadiniinta taraafikada, xalka kaliya uu yahay nidaamka tareenka, ayuu yiri. Muwaadiniinta sheeganaya inay ka daaheen nidaamka tareenka, Metropolitan [More ...]
Yüce: Çöz Solm Nidaamka Tareenka Xalka Wadooyinka ”
Duqa magaalada Sakarya Ekrem Yüce 1-3 ayaa ka qeybgalay Madasha Caalamiga ah ee Magaalada Marmara oo ay soo qabanqaabiyeen Midowga Degmooyinka Degmooyinka Marmara. 'Madaxweynayaashu Hadlayaan: Wadajir Fikir, Wadajir Ah' [More ...]
Professor Dr. Aksoy, 'Nidaamka Tareenka ma ah Arrinta Mudnaanta leh ee Trabzon'
Professor Dr. Aksoy, "Nidaamka tareenka ma aha mowduuca maanta," ayuu yidhi, wuxuu soo diray farriimo cajiiba. Aksoy, dawladaha hoose, "Nidaamka-tareenka ee cusbitaalka magaalada halkii maalgelinno waaweyn laga heli lahaa, sida wadada koonfurta ku xusan waa in la dhiso," ayuu soo jeediyay. Trabzon [More ...]
Iskuulada ayaa ka furmay Istanbul, Dhibaatada Gawaarida ma jirto
Magaalada Istanbul, ku dhawaad ​​ardayda 3 milyan iyo ku dhowaad hal kun oo macallimiin ah 200 ayaa sameeyay bilowga xiisadaha maanta. Magaalada ay ku sugan yihiin gaadiidka dadweynaha oo bilaash ah, gaadiidleyda adeegga ayaa la siiyaa si ay waalidiinta ugu qaadaan. Muwaadiniinta, İBB Madaxweynaha Ekrem İmamoğlu'nun [More ...]
Diyaargarowga Dhaqdhaqaaqa cusub ee Gaadiidka ayaa laga bilaabay Sakarya
Madaxweynaha Ekrem Yüce ayaa xafiiskiisa AKOM kula kulmay xafiisyada xafiisyada ee loo yaqaan "Ula titm Transportation geniş". [More ...]
Magacyada Istaraatiijiyada Istiraatiijiyada Istiraatiijiyada Istiraatiijiyada Istiraatiijiyada Istiraatiijiyada Xargaha: Istiraatiijiyada Istiraatiijiyada Istiraatiijiyada iyo Xaruntooda (Xaqiiqada), Beylikdüzü Metrobus, Nidaamka Tareenka, Khadaka Madaarka Aksaray, Xarun Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul iyo Magaalada Metrobus [More ...]
Marka nidaamka xadiidka kilomitir kiiloo mitir ee 221,7 uu ka socdo magaalada Istanbul, dhererka nidaamka tareenka magaalada wuxuu gaari doonaa 233,05 kiiloomitir oo leh qeybta kiloomitir ee 454,75. Muhiimadda nidaamka tareenka si loo yareeyo cufnaanta taraafikada ee Istanbul [More ...]
Dirinler Sameynta Gawaarida Maalin Maalinta
Dirinler, oo soo saareysay aaladda mashiinnada iyo wargeysyada tan iyo markii 1952 ee İzmir, uu la saxiixday kacaan laba jibaar ah oo tareenka wata sumadda Drinns. 30 laga bilaabo dhulka hoostiisa, kaas oo yareynaya hawsha maalinta-dheer ilaa daqiiqadaha 10 [More ...]